Top 10 kale oo ay tirtirto dhakhtar si ay u bixiyaan qaab ka sii fiican
Ma waxaad isku dayaya in ay tirtirto qaar ka mid ah files yihiin in ay aad u adag tahay in ay tirtirto? Oo dhan waxaan ku soo gaarto xaaladood oo kale oo inta badan la yaabay sababta files, haddii aanu heli tirtiray! Badanaa magacyada kharribeen file, faylasha, kuwaas oo guud ahaan tagay by fayrasyada iyo waxaa loo tixgeliyaa halis u your computer. Oo sidaas waa mid aad muhiim u ah in aad takhaluso files kuwaas oo ay sida carqaladeyn karaan waxqabadka your computer. Haddii aad soo food saartay arin la mid ah ka dibna eegi jirin dheeraad ah dhakhtar delete halkan waa aad samatabbixinta!
Waxaa jira tiro ka mid ah danabka laga helo suuqa kaa caawin doonaa tirtirka file laakiin tirtirto dhakhtarka waa ka yara duwan, kuwaas oo si joogto ah biilasha. Delete dhakhtarka waa mid ka mid ah oo kaliya ayaa xereyn utility tirtirka kaa caawin doona inaad ka takhalusaan files joogay oo kaliya oo aan diyaar u your computer inuu ka tago. Marka laga reebo faylasha waxyeello, tirtirto dhakhtarka weliba hubinayaa in faylasha index.dat ayaa sidoo kale la tirtiro oo ku kaydi taariikhda internet-ka. Kuwani index files waxaa la qorsheeyay tirtirka mar kasta kabaha computer kor.
Tirtirka File dhakhtarka delete waa wax fudud oo ay user saaxiibtinimo interface. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa dooran file ah in aad rabto in aad tirtirto oo loo doorto dariiqada loo marayo oo tirtirka la sameyn doonaa.
Delete dhakhtar waxay bixisaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn in dadka isticmaala ay ka mid yihiin qaab boost ilaa iyo takhalusaya files aan loo baahnayn waxyeello. Faa'iida kaliya ee dhakhtarku delete waa in laga yaabo in waqti habka ah dad tira yar oo ah mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee sababta ay dadku mar walba doonaysa ay ka duwan.
Top 10 barnaamijyadda badiilka ah in ay tirtirto Doctor
Raadinta qaar kale oo wanaagsan in ay tirtirto Doctor? Waa hagaag halkan waxaa ku qoran liiska yar ee biilasha software in aad ku rakiban kartaa in aad computer in ay tirtirto faylasha la rabin.
1. File shirqoolka : File dilay waa software utility anti-furin in takhasusay tirtirka ee files qufulan. Shaqada ee utility waxaa ka mid ah furo files koowaad ka dibna waxay ku dhow oo dhan geedi socodka la xiriira in ay ahaayeen ku rakiban yihiin. Kadib markii geedi socodka ayaa la xiray, waxaa tirtiri kartaa faylasha xidhin si deg deg ah oo ku haboon. Iyadoo rating ka mid ah 4.5, waxaa xaqiiqo ah waa mid ka mid ah faylka ugu wanaagsan ee la tirtiro software utility daaqado shaqeeya on XP iyo wixii ka sareeya.
2. LockHunter : Inta badan dadka u hesho fariin qalad this: "file waxaa aad isku dayaya in ay tirtirto loo isticmaalay ay qaar ka mid ah hab kale oo". Macna ma laha inta u adag in aad isku daydo in ay xirto dhammaan barnaamijyada maamulka, fariin tani weli hayaa dhisayaa ilaa wakhti kasta oo aad riixdid batoonka ku tirtirto. Ka fikir isku dayaya LockHunter haddii aad rabto in laga takhaluso dhibaatadan. LockHunter idin ​​tusiyo dhammaan geedi socodka la isticmaalayo file ah in aad ayaa isku dayaysa inay buuxiso. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad magaca, nuqul ama ka soo kabsadaan files in aad shil tirtiray. Software ka shaqeeyaa madal Windows oo dhan versions kor ku xusan 2000 oo rating ka mid ah 4.2 ka dhigaysa u qalantaa isku dayaya.
3. IObit unlocker : Sida magacaba ka muuqata, unlocker IObit waa utility xaq u furo faylasha, fayl iyo magaca, nuqul ama u guuraan faylasha doonayo si toos ah. User A si fudud isugu bedeli kartid hab lagu qasbay iyo habka caadiga ah ee qaab fiican. Software Tani waa la heli karo madal Windows iyo waddaa on XP iyo wixii ka sareeya versions. Users ayaa siiyey rating ah 4.6 out of 5.
4. BlitzBlank : welwelsan faylasha xaasidnimo iyo waxyeello on your computer in aadan awoodin in aad tirtirto? BlitzBlank waa mid ka mid ah utility software ugu waxtar leh in ay xaqiijin doonaan in tirtirka oo dhan files xaasidnimo ah in ay aad u adag tahay in aad tirtirto ka hor inta! Heli labadaba 32-yara iyo version 64-yara ee Windows ah, BlitzBlank waa la jaan qaada dhamaan versions of Windows XP kor ku xusan. Software waxay daliil ay u qalmo in ay qaadan rating ah 4.6 out of 5.
5. jeebka KillBox : utility yar software weli heer sare ah oo waxtar leh, jeebka KillBox la interface fudud oo hab caadiga ah ee la tirtiro kuwa files "adag tahay in ay tirtirto" siisaa dadka isticmaala ay. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waxaa hoos u kaliya ee files in aadan awoodin in aad tirtirto oo dooran hab si ay u tirtirto. La jaan qaada Windows XP iyo versions sare, jeebka KillBox waa rakibidda qiimihiisu. Rating A 4.8 out of 5 xaq tayada shaqo ee software yar.
6. xir-UnMatic : xir-UnMatic waa file tirka software ah utility heer sare faa'iido in si deg deg ah ku tusaysaa muuqaalka guud ee dhammaan hababka ku joojiyeen tirtirka ee faylka. Marka user ku dila geedi socodka, waxay si fudud u tirtiri kartaa file ka. La socon nidaamka Mac hawlgalka, software tani waa lacag la'aan ah si loo soo dajiyo. User rating A 4.6 out of 5 ka dhigaysa u qalantaa isku dayaya!
7. qashinka Waxaa adkaato noqoto qashinka? Waa hagaag waxaa laga yaabaa in arrimaha la tirtiro files ee qashinka ay sabab u tahay qufulo. Qashinka Waa software utility gaar ah u furayaa files iyo sidaas awood u user si aad u faaruqiso ay qashinka si fudud. La socon nidaamka ka hawlgala Mac, in aad sidoo kale u sheegi kartaa software ka sameeyaan in ay shaqada si toos ah ama tirtirto waxyaabaha gacanta. Iyadoo rating ka mid ah 4.5, waxaa hubaal waa in la liiska utility file-delete ugu wanaagsan.
8. Joogtada tirtire : software Utility in tirtirtaa files si ammaan ah, waxa ay qaadataa oo kaliya dhowr ilbiriqsi rakibo ee software-ka. Shaqo wax ku ool ah oo ay la socdaan user saaxiibtinimo interface, Eraser Joogtada ah Mac xaqiiqdii waa mid ka mid ah software ugu fiican utility u madal.
9. iXoft FolderWasher : Wixii folder ee la doortay, FolderWasher tirtirtaa dhammaan faylasha ah in lagu bilaabo in muddo ah. OS Mac The abuuraa files ku meel gaar ah laga bilaabo xilliga iyo software utility waxa uu xaqiijinayaa in dhammaan faylasha sida si degdeg ah tirtiray.
10. MacKeeper Shredder : MacKeeper Shredder saamaxaya kuwa isticmaala in ay tirtirto ee files yihiin in ay adag tahay in ay tirtirto. Waa arrin aad u fududahay in la isticmaalo iyo fogaado overwriting faylasha dhowr jeer ku disk ah.
Tirtirka ah Shil iyo soo kabashada
Ma kac aad tirtirto file in aad aan u maleeyeen inay? Waa hagaag, uma baahnid inaad wax laga walwalo tirtirka shil ah ee files dambe! Iyadoo kabashada xogta Wondershare, waxaad soo kaban karto, wax kasta iyo wax walba! Waxaad soo kaban karto, ma ahan oo keliya files, sawiro iyo videos laakiin Wondershare kaloo ka caawisaa inay soo dhiciyaan emails aad. Software wuxuu taageeraa dhowr ah oo ay ka mid yihiin qalabka recycle bin, flash drives, disk adag iwm
Waxaa jira xaaladood badan halkaas oo aad ka tirtirto files si joogta ah sida adiga oo riixaya "wareeg + del" oo aan gurmad ah. The Wondershare qalab soo kabashada soo gala play oo dhan xaaladood oo kale. Qalab wuxuu taageeraa labadaba "kabashada ammaan ah" iyo "soo kabashada dhamaystiran". Iyadoo dib u soo kabashada ammaan isku dayayaa inuu ka soo kabsado xogta adiga oo aan waxa dhaawac, dhameystiran kabashada isku daya ee helitaanka faylasha lumay oo qoruhu.
Sida loo isticmaalo qalab kabashada Wondershare?
Talaabada 1: Dooro habka dib u soo kabashada
Talaabada 2: Sawirka your computer.
Talaabada 3: Ladnaansho / eegis iyo badbaadin files
Gunaanad: Iyadoo Doctor Delete waa software kaamil ah utility u tirtiro kuwa "adag tahay in ay tirtirto" files laakiin qaar ka mid ah khasaaraha ay dadka ka tagay yaabeen haddii ay jiraan software kale ku haboon yahay ujeedadaan ama aan. Waxaa jira dhowr file tirka software labada Mac iyo Windows madal iyo haddii aad shil tirto faylasha qaar, ka Wondershare qalab kabashada had iyo jeer waa aad caawimaad!
> Resource > bedelan karo > Top 10 kale oo ay tirtirto Doctor si ay u bixiyaan qaab ka sii fiican